ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: မောင်စွယ်စုံကျမ်း
Posted by မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 9:39 PM2မှတ်ချက်
Posted by မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 7:40 PM 1 မှတ်ချက်
ခေတ်မီလာတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်မှာ ကြည့်သင့်တယ်ထင်တာကို တင်ပေးကြည့်တာ ရိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် ဒီဗီယိုက လွန်ခဲ့တဲ့2008ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ...
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ အရင်ပုံရော အခုပုံရော စုစည်းချက်တွေ(ကျားများသာ..တိန်)
ဘာမှတော့ မပြောလိုဘူး .ကျနော် ခုနက ပြောသလိုပေါ့ .ဘာမှကို မပြောလိုပါဘူး ပုံလေးတွေ စုဆောင်းပေးတဲ့ သဘောပါပဲ မြန်မာပြည်က စာစောင်တွေမှာတောင် ...
ဒါကတော့ ဖွေးဖွေး ချစ်သူများအတွက် သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေကို စုစည်းပေးတာပါ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဖွေးဖွေးပုံဆိုကူးထား သိမ်းထားလေ့ရှိတယ် ။ အဲ့တော့...
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဖုန်းအတွက်သာမဟုတ်ပဲ ကွန်ပျုတာမှာလည်း သုံးလို့ ရပါတယ် အပျင်းပြေ အပြန်အလှန် စကားပြောလို့ ရပါတယ် ။ သိချင်တာလည်း မေးလို့ ...
ကတာလေးနဲ့သီချင်းလေးသဘောကျလို့ ပါ ( မိန်းကလေး မကြည့်ရ....တိန်)
သီချင်းလေးရော ကတာလေးရော မိုက်တယ်။ ကြည့်ကြည့်..လန်းတယ်.........။
ဒီဆော့ဝဲလေးက အတော်သဘောကျဖို့ ကောင်းသလို အရမ်းလည်း အသုံးဝင်တယ် အဆင်ပြေသလို သုံးကြည့်ပါ ။ ကြောင်လေးနဲ့ ကြောင်မလေးနဲ့ စကားပြောတာကိုမှ ...
ညီမလေးဈေးကောင်းရပါစေ ( ဒီကိစ္စကို မလေးရှားကနေ ထောက်ခံပါတယ်)
Sorry ပဲ ညီမလေး ... ကိုယ် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ မင်းအမေ နေမကောင်းတာ မင်းမောင်လေး ညီမလေးတွေ ကျောင်းစားရိတ်လိုနေတာ မင်းကိုယ်တိုင်အတွက် ရောင...
ဘာအတွက် ရိုက်လည်းတော့မသိဘူး ..ကြည့်ရသူတွေက ရင်တဖိုဖိုပဲ..ခွိ.း) တကယ်လိုက်ဖက်တယ် သူတို့ ဗီဒီယိုလေးကလည်း ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ် ...
သိစေချင် ဖတ်စေချင်၍သာ တင်ပါသည် (ရိုင်းသည်ဟု မထင်စေချင်ပါ)
ဘူလေးလည်း ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောကျတယ်...ရေးထားတာ အမှန်တွေချည်းပဲ. အခုပြောမယ့် ပုံပြင်လေးကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဖတ်မိသမျှလေး ပြန်လည်မျှ...
ဒီနေ့ ကျနော်တို့ စက်ရုံ( မလေးရှား ) မှာ လူသေပါတယ် ....25 - 10 - 12
ညည အိပ်မပျော်သူများအတွက် လက်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ . ဖတ်ပြီးတော့ တွေးစရာတွေ အများကြီးပဲ.။ ဖတ်မကြည့်ရသေးဘူးဆို ရင...
ဖုန်းတွေကို အင်တာနက်ကနေ မက်ဆေ့( SMS) ပို့ ချင်ရင်(မြန်မာ လည်းရ၏)
ဒါလေးကတော့ အင်တာနက်သုံးရင်းနဲ့ ဖုန်းတွေကို မက်ဆေ့ပို့ လို့ ရတဲံ ဆိုဒ်လေးပါ အသုံးပြုပုံက အဲ့ဆိုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်၊ နိုင်ငံရွေး ၊ဖုန်းနံပတ်ရိ...
ဒါလေးက မြန်မာပြည်ကို ပြောထားတဲ့ဟာလေးပါ (၁၈ နှစ်အထက်ပဲနော်)
ဒါလေးကတော့ သူငယ်ချင်းလုပ်ထားတာ။ မေးလိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မေးနိုင်ပါ၏ Flash သီချင်း လုပ်နည်းတွေကို ထပ်ဆင့်ပြောပြပေးဖို့သူ့ ကို ပြေားထ...
ဖေ့ဘွတ်က ဖလမ်ဖလမ်းတွေကို ဖေ့ဘွတ်မသုံးသော သူများသိစေဖို့ 
အားလုံး ၂၀၁၂ သင်္ကြန်မှာ ဖလမ်းဖလမ်ထနေတာတွေပါ...ဖေ့ဘွတ်မှာ ပလူပျံနေလို့ကော်ပီ ပြန်ယူလာတာပါ. သူတို့ မှဝတ်တော့လည်း ဒို့ တင်ရတာေ...
ဒီသတင်းလေးကို ဖတ်မိတော့ အရမ်းအံသြောမိပါတယ် မောင်နှမ အရင်းမှန်းသိတာ နောက်ကျသွားတယ်တဲ့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော် ။ အခုတစ်ခါပဲ ကြားဖူးလို့ဖတ်မိ သမ...
ဒီဆိုဒ်ကိုမလေ့လာမီ ဖတ်ဖို့ အတွက်
မကျေနပ်ချက်နှင့် ကျနော်၏ရန်ပွဲ (4)
ဖိုးခွားလေး ၏ ကဗျာများ (69)
ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ ကဗျာ (7)
လွမ်းဝေအောင် ရေးတဲ့ ကဗျာ (1)
သိုက်ကြီး( က.ပ.တ )၏ကဗျာများ (7)
မောင် ရေးတဲ့ကဗျာ များ (9)
Photo Slideshow လုပ်နည်း (7)
Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (5)
Photoshop နှင်ဒီဇိုင်းပညာများ (50)
Photoshopဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (11)
ဓာတ်ပုံ ပြင်ဖို့Frame ဒီဇိုင်းများ (8)
ဓာတ်ပုံကို အရှင်ဖြစ်အောင်းလုပ်နည်း (1)
ဖိတ်စာ၊လိပ်စာ ဒီဇိုင်းကဒ်လုပ်နည်း (3)
အလန်းဇယား PhotoShop ဒီဇိုင်း (5)
Mp3/Mp4 စွယ်စုံ Converter ဆော့ဝဲ (29)
Nero 8 ၏ အသုံးဝင်မှု (2)
VCD-DVD-Burning ဆော့ဝဲများ (4)
VZO Myanmar Version (1)
Account ကို အပြီးဖျက်နည်း (1)
Facebook ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ (13)
Facebook ရဲ့ သတင်းထူး (2)
Facebook အကောင့် ဖွင့်နည်း (1)
Flash Song လုပ်နည်းစာအုပ် (3)
Flash Song လုပ်ရင်သုံးဖို့ပုံများ (4)
Flash Song အမြန်လုပ်နည်း (8)
Flash သီချင်းနားဆင်ရန်နှင့်ဒီဇိုင်း (34)
FlashSong လုပ်နည်းဆော့ဝဲများ (13)
Account လုပ်နည်းမျိုးစုံ (1)
Blog Setting ပြင်နည်းများ (2)
Blog ထဲမှာ ရုပ်၊သံဖိုင်တင်နည်း (24)
Download Software နဲ့လုပ်နည်း (9)
Internet Explorer ဆိုင်ရာပညာများ (3)
Mozilla Firefox ဆိုင်ရာပညာ (10)
Website နဲ့Blog နည်းပညာများ (53)
Youtube မှ Download ယူနည်း (1)
ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲ သိချင်ရင် (2)
ဘလော့တစ်ခု အောင်မြင်စေဖို့(1)
ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets (21)
Android နည်းပညာများ (2)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (13)
Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (26)
Phone မျိုးစုံအတွက် Games (3)
Phone မှာ Snapshot ရိုက်နည်း (1)
Phone အတွက် Anti Virus (1)
Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် (1)
Phone အတွက်မြန်မာအဘိဓာန် (3)
Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် (2)
Phone အတွက်မြန်မာပြက္ခဒိန် (1)
Phone အလန်းဇယား Rington (1)
Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (60)
Driver အကြောင်းနဲ့Driver များ (1)
Hacking နည်းပညာများ (12)
PDF Book Creater (9)
Registery ပြသနာ နဲ့ ဆော့ဝဲများ (1)
USB STICK LOCKER (4)
Window7၏ အားသာချက် (2)
Window Genuine ဖြေရှင်းရန် (3)
ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့Anti Virus (17)
မှားဖျက်တာပြန်ရှာဖို့ Data Recovery (4)
Gmail Hacking ပညာ (4)
Gtalk ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (7)
Gtalk မှာသုံးဖို့ပုံ နှင့်စာ အလန်းများ (3)
Gtalk/Gmail နည်းပညာများ (23)
Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန် (7)
စာစီစာရိုက်နှင့် Miscrosoft Office (20)
ကျနော်၏ သဘောထားအမြင်များ (1)
စွယ်စုံ အထွေထွေ ဗဟုသုတ (21)
ပရဟိတအလှု နှင်ဆိုင်သော (10)
မလေးရှား အတွေ့ အကြုံ ဗဟုသုတ (8)
သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား (14)
အမှတ်တရနေ့ ထူးများ (10)
ချစ်ခင်သူတို့ ရဲ့မွေးနေ့ များ (5)
ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ သီချင်းများ (1)
ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ် (1)
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)၏ အင်တာဗျုးများ (5)
မောင်ရဲ့ အမှတ်တရ ပုံများ (14)
Sung Yu Yi ပုံများ (1)
ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ မွေးလာခဲ့တဲ့ ဒို့ 
zwmnna.com ကို ၀ယ်ယူဖို့့
ပိုက်ဆံ အကုန်ခံသူ များမှာ
ကိုစူပါမန်း ၊ မျိူးမင်း ၊ ဖိုးခွား
ညီညီ ၊ပုသိမ်သား ၊ ကိုဖြိုးနဲ့
Rates on 21 Nov 2012
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African Rep.ChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Dem. Rep.)Congo (Rep.)Cook IslandsCosta RicaCote d'IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaeroe IslandsFalkland IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (North)Korea (South)KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSamoa (American)Samoa (western)San MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSerbia and MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt HelenaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands (UK)Wallis & FutunaYemenZambiaZimbabwe Dial Number:
အာရှနိုင်ငံတကာ ကလေးများ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်နှင့် ဆုရကလေးငယ် သုံးဦးတို့ တက်ရောက်
လှပသောအသားအရေ ပိုင်ဆိုင်လိုသူ တိုင်းအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက် ငါးမျိုး
အကြင်နာနန်း: pc tools registry mechanic 2013 free download ful...
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုး)၏ မလေးရှားနိုင်ငံ ဓမ္မဒါန တရားပွဲ ခရီးစဉ်များ
လင်ခန်းမယားခန်း ပြတ်စဲခြင်း (အိမ်ထောင်ရှင်များသိမှတ်ဖွယ်)
Today Market Rates (21 Nov 2012)
ဇော်သက်ထွေး ၏ ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲ နှင့် နူးညံသော နှလုံးသား, အပိုင်း (၅)
ဂျင်စင်း ကြက်သားဆန်ပြုတ် (삼계탕)
Face Book ထဲက နှစ်သက်မိသော စာသားများနှင့် ပုံလေးအချို့
အိုဘားမားမြန်မာခရီး ဒေါစုစာနှင့် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့စာ
Free thinker တစ်ယောက်၏ Existentialism အတွင်းစည်းမှ လူသားဆန်ဝါဒ ကျောက်ဖြစ်လက်ရာ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့\_ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးကို သွေးတိုးစမ်းခြင်း
Matti Say Ishq by Umera Ahmed Urdu Novel
ပီဂျေမြို့ရှိ ရတနနာရာမမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
HAppy Anniversary>>>>>ချိုမြိန်သောအချစ်နေ့များ :)
တတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် အောင်ပွဲ မှတ်တမ်းပုံများ
မျိုးကြီး - အပြာရောင်ည ( Remix )
ရိုးရာမပျက် ဆင်ယင်နွှဲ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ
စင်ကာပူ Bird Park သို.အလည်တစ်ခေါက်
မီးဘောလုံးနဲ့ ကစားတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လူငယ်ကစားသမားများ...
ကြက်သွန်နီ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ။
ကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်
♥ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် နှုတ်ဆတ်ခဲ့ပါတယ် ♥
Reminder: Mg Thet Wai invited you to join Facebook...
ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရဲ့ နားခိုရာ နေရာလေးပါ......
Wider Forum Box on Home Page -2columns
Jquery Style Show "Hidden Text" for Blog
MathType v6.7 Full Version Patch Crack Serial Key
Korea movie guide
http://ifile.it/ soft - upload
Copyright @2011 www.zwmnna.com,Website Design by မောင်(စွယ်စုံကျမ်း). Powered by Blogger.
Posted by naihan at 07:23